मुख्यमन्त्री गुरुङले नै निरन्तरता पाउलान् वा प्रतिपक्षीकाे बाटाे खुल्ला ? | Seto Khabar
मुख्यमन्त्री गुरुङले नै निरन्तरता पाउलान् वा प्रतिपक्षीकाे बाटाे खुल्ला ?
२६ वैशाखमा मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका गुरूङ विपक्षी गठबन्धनले सरकार बनाउन नसकेपछि ठूलो दलको नेताको हैसियतले २९ वैशाखमा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका उनले उपधारा ४ अनुसार बिहीबार १२ बजेपछि संसदमा विश्वासको मत लिने छन् ।
स्पष्ट बहुमत नरहेकाले विपक्षी दलका सांसदलाई फ्लोर क्रस गराउन सके मात्रै पृथ्वीसुुब्बा नेतृत्वको सरकारले आगामी डेढ वर्षका लागि निरन्तरता पाउने छ ।
चार वटै विपक्षी दलले सांसदलाई मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा मत हाल्न ह्वीप जारी गरेका छन् । काँग्रेस, माओवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीले मुख्यमन्त्री गुरूङको विपक्षमा मत हाल्न बुधबार ह्वीप जारी गरेका थिए ।
एमालेले भने पक्षमा मत हाल्न ह्वीप लगाइसकेको छैन । गण्डकीमा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैसँग स्पष्ट बहुमत छैन ।